Lapho uhlela imikhosi yomshado, ungakhohlwa ukuthi umakoti nomkhwenyana, ngokuba yizinhlamvu eziyinhloko zalesi senzo esingcwele, banelungelo leholidi labo, elibizwa ngokuthi i-honeymoon. Futhi uma ngaphambili lezi zinsuku ezingamashumi amathathu zihlotshaniswa nesidingo sombhangqwana osanda kushada ukuba badle isiphuzo sokuphuza utshwala esibizwa ngokuthi i-mead inyanga inyanga, khona-ke ezweni lanamuhla le nkathi ihlotshaniswa nokubonakaliswa okuphezulu kwesithando nesithandani kumbhangqwana.
I-American, njengezimiso zaseYurophu, ezisungulwe ezweni lethu, ithi emva nje komshado, umndeni omusha kufanele ube wedwa. Indlela elula kunazo zonke yokufeza lesi simo ngukuya enyangeni.
Kuze kube manje, ama-ejenti amaningi okuhamba nama-opharetha anikeza izinhlobonhlobo zezivakashi zomshado ezenzelwe noma iyiphi iphaketheni.
Ekunqumeni ukuchitha uhambo nganoma yiluphi uhambo, lo mbhangqwana kufanele abe nombono ovamile mayelana nokuthi yikuphi ukuzijabulisa okufanele ukhethe nokuthi ungenza kanjani izinsuku zokuqala namaviki okuphila ndawonye ukhunjulwe ngokugqamile, mhlawumbe ngisho nokubonakala okungavamile.
Ngakho-ke, eminyakeni engama-20-30 edlule, imibhangqwana eminingi emva komkhosi womshado ngenjabulo yafika ezintabeni. Futhi uma imikhankaso efana ngaphambili yayinganiselwe ensimini yezwe elikhulu elibizwa nge-USSR, manje manje ungahamba noma yikuphi eYurophu nakwezwe. Ngesikhathi esifanayo, uma omunye womlingani engeyona fan yokuphumula okusebenzayo, lokho kushushuluza, ukugoqa, ukugijima, ukukhuphukela ezintabeni eziqhwaqhoziwe ezinezintaba ezinzima, ezintabeni ongazitholela futhi uphumelele.
Isibonelo, iningi labashayeli bezokuvakasha linikeza i-honeymoon eSwitzerland Alps. Lapha awukwazi nje ukujabulela umoya ohlanzekile wezintaba, ukujabulela imvelo engaphendulwanga, kodwa futhi ukubhuka emadolobheni amaningi aseYurophu - inzuzo yawo wonke amazwe lapha lapha amancane kakhulu, futhi ngokukhipha i-visa ye-Schengen ungavakashela idolobha elilodwa ngamehlo aphakathi nesikhathi samanje.
Inketho eyengeziwe yendabuko yokuvakasha kwenyanga yindlela eya olwandle. Ngesikhathi esifanayo, ungakhetha kokubili ukhetho lwesabelomali bese uya endaweni yokuhlanzeka ogwini lolwandle oluMnyama, futhi ucabangele izinketho ezingavamile, isibonelo, ulwandle olufudumele nelanga elimhlophe elimhlophe lamabhishi aseDominican Republic noma amaMaldives, amahle ayingqayizivele futhi angenasidingo eThailand, amaqembu ahlaselayo Ezikhathini zama-nightclub ze- Ibiza.
Ungase futhi usebenzise uhambo lwakho lomshado endaweni enothando kakhulu emhlabeni - eParis. Ngaphandle kwe-Eiffel Tower eyaziwa emhlabeni wonke, iCathhedral of Our Lady yaseParis, i -Mare Quarter, i- Champs Elysees, iLouvre, ungangena ebuntwaneni. Ukuze wenze lokhu, kwanele ukuvakashela i-French Disneyland, lapho izingane ezingathandi ukuphumula khona kuphela. Unentshisekelo emlandweni weziphuzo ezidakayo? IFrance, ikhaya labo abaningi, linikeza ukuvakashela izivini, izitsha zewayini futhi zijwayele ubuchwepheshe bokukhiqiza iziphuzo ezidakayo.
Amanye amazwe anikezela labo abasanda kushada ukuphindaphinda, imikhosi eshadile idlulile. Ngakho-ke, lapho beya eCzech Republic, abaningi bathatha enye yezindlu zesikhathi esiphakathi futhi babhalise kabusha. Inqubo efanayo iyatholakala emabhishi aseMaldives. Lapha ujabulela ukuthi ugqoke izingubo zendawo zendawo futhi upende ngaphansi kwemisebe yelanga elangeni.
Uhambo lomshado lapho abaningi bethu abasanda kushada behamba khona, nakho kwenzeka okuthobekile. Ngakho, ikakhulukazi othandwayo kukhona ukuvakasha komshado eTurkey naseGibhithe. Lapha uzonikezwa amahhotela omshado amahle kakhulu, ephumula lapho, uzozizwa njengomuntu ombhangqwana wasebukhosini.
Kunezinketho eziningi zokhetho lwezinkanyezi, kodwa ukhetha ukuvakasha, kubalulekile ukucabangela izintandokazi zombili zomshado.
"Trouble" - kuyini?